जसपा संसदीय दलको नेतामा महन्त, डा. बाबुरामको यस्तो तयारी « Ok Janata Newsportal
जसपा संसदीय दलको नेतामा महन्त, डा. बाबुरामको यस्तो तयारी
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल संसदीय बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित जसपा संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा संसदीय दलको नेता चयनको एजेण्डा छ । राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको जसपाले हालसम्म पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेको अवस्थामा आज बस्ने बैठकले नेता चयनको तयारी गराएको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई दलको नेता चयन गर्नेगरी तयारी अगाडि बढेको छ । यद्यपि दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समेतले दावी गर्दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म उनीहरुले खुलेर पार्टी बैठकमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत नगरेको स्रोतको भनाइ छ । जसपाको ३४ सांसद मध्ये बहुमत सांसद ठाकुरको पक्षमा रहेको दावी गरिनुले पनि उनको सम्भावना बलियो रहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय दलको नेतामा डा. बाबुराम भट्टराई भए ठिक हुने बताएको स्रोतले जनाएको छ । यदि संसदीय दलको नेतामा भट्टराई नभए अलग्गिन सक्ने संकेत पनि देखिएको छ । भर्खरै भएको एकतामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा एक भएका थिए ।